🥇 ▷ Cilad basaasnimo cusub ayaa laga helay taleefannada 'SIMs' ✅
Cilad basaasnimo cusub ayaa laga helay taleefannada ‘SIMs’
Had iyo jeer waa suurto gal inay macquul tahay, marka la eego amniga taleefanka casriga ah, kaarka SIM wuxuu matalaa halis aad uga weyn kan softiweerka ah. Nasiib wanaag (haddii taasi ay tahay ereyga saxda ah), inta badan weerarada waxaa lagu soo rogay nidaamyada hawlgalka.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in warbixin ay soo gudbisay Engadget, cillad amni oo keliya ayaa la helay oo laga yaabo inay kuu oggolaatay inaad basaasdo howlaha taleefankaaga muddo 2 sano ah.
Kooxda baarista amniga, Qalab-ada, ayaa la sheegay inay ogaatay nuglaanshaha cusub ee tikniyoolajiyada kaararka SIM-ka. Waxaa loogu magac daray Simjacker, waxay dadka u ogolaatay inay suurta gal ka dhigaan inay basaasaan taleefannadooda casriga ah. Ka sii dara, iyada oo aan helin wax tilmaam ah oo ku saabsan dhacdadaas.
Marka sidee u shaqeysaa? Hagaag, Simjacker wuxuu adeegsadaa farriin SMS ah oo ay ka kooban yihiin tilmaamo lagu galo websaydh oo lagala soo baxo APP ku habboon oo leh dhowr bixiyeyaal kaarka SIM. Khaladaadka waxaa loo isticmaali karaa si loo helo macluumaadka goobtaada iyo aqoonsiga gaarka ah ee taleefankaaga. Sidaa darteed, tan waxaa loo adeegsan karaa aaladda ‘iskuxirka’ oo diiwaan gelisa dhammaan xogtaada.
Waqtiga qoraalka, wax faahfaahin ah lama bixin. Taasi? Ma u maleyn wayday inay ka dhigayaan faahfaahinta muuqaalkan mid guud, sax? Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogyahay in nuglaanta ay ku shaqeyn karto aaladda Android iyo iPhone labadaba. Hadda iyada oo laga ogaado 30 waddan ugu yaraan 2 sano, waa wax aad uga yar walwal yar. Gaar ahaan maxaa yeelay hadda waa la helay.
Qaybta ugu xun ayaa ah, annagoo ah macaamiisha, ma jiraan wax badan oo aan ka qaban karno.
Maxay kula tahay Ma ka walwalsan tahay amniga taleefankaaga casriga ah? – Noo soo sheeg faallada!